बृद्ध आमाको चित्कार: बाबु, मेरो छोरालाई ऊखूको लाक्रा रलाठिले हानि-हानि मारे, मैले न्याय पाइन ! (भिडियो रिपोर्ट) – पुरा पढ्नुहोस्……
बृद्ध आमाको चित्कार: बाबु, मेरो छोरालाई ऊखूको लाक्रा रलाठिले हानि-हानि मारे, मैले न्याय पाइन ! (भिडियो रिपोर्ट)
पोखरा । पोखराकी ६२ बर्षकी बृद्ध बिष्णुकुमारी पाण्डे आफ्नो २६ वर्षीय छोरा सुर्य पाण्डेलाई ‘उखु र चक्कुले हानेर मारेको’ भन्दै न्याय खोज्न प्रहरी कार्यालय जन्छिन, गैरहन्छिन, अझै जाँदैछिन्। यसरी उनी प्रहरी कार्यालय लगायतका विभिन्न प्रशासनिक निकायमा धाउन थालेको झण्डै चार बर्ष भयो ।
बृद्ध बिष्णुकुमारी भन्छिन् – ‘मेरो छोरालाई मारे, मैले आजसम्म न्याय पाईन ।’ ४ बर्षदेखी मेरो काम नै बिभिन्न प्रहरी कार्यालय, मानव अधिकार आयोग लगायतमा धाउने मात्रै छ।
‘कहिले काँही कालो चिया दिन्छन, नत्र पानिकै भरमा बेलुका घर फर्कन्छु’ – बिष्णुकुमारी भक्कानो फुट्ने गरी रुँदै सुनाउछिन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रबक्ता डिएसपी रबिन्द्रमान गुरुङ ४ बर्ष अघिको घटना भएपनी आँफुहरु आएपछि पुनः अनुसन्धान गरिरहेको बताउँछन।
ढिलो त भयो, तर प्रहरीले सत्य तथ्य बाहिर ल्याएरै छोड्ने डिएसपी गुरुङको दाबी छ। खासमा मृतक सुर्य पाण्डेको हत्या थियो कि स्वभाविक मृत्यु थियो भन्ने कुराको टुङ्गो अहिलेसम्म लाग्न सकेको छैन।
ति ६२ वर्षीया बृद्ध आमाको चित्कार र प्रहरीको भनाई सहितको बिशेष कार्यक्रम भर्खरै एक टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको छ। आमाको पिडा हेर्दा जो कोहीका आँखा रसाउँछन्। कृपया गन्डकी टिभिले तयार पारेको तलको पुरा भिडियो हेर्नुहोस :
Prev‘नेपाल आइडल’का नरेश पातली बोल्दा बोल्दै धुरु-धुरु रोए, थामिएन कसैको आँसु हेर्नुहोस् ( भिडियो सहित)
Nextदशैँमा टिकासँगै लगाईने जमराको जुसले कस्ता कस्ता रोग निको पार्छ ? हेर्नुहोस्( भिडियो सहित)
नेपालको यस्तो अच,म्मको ठाउँ जहाँ महिला बस्न पाउँ;दैनन् ? कारण यस्तो अ;नौठो (भिडियो सहित)
विदेशबाट आउनेले पीसीआर नेगेटिभ भए सिधै घर जान पाउने
आमाले तरकारी खेती गरि पढाएको छोरो जिल्लाकै पहिलो ‘ पाइलट ‘ बने ।
रुकुम घʼटना सेलाउन नपाउदै गोरखामा अर्को घटना, श्रीमानले फोनमा बोलेको १५ मिʼनेटपछि …… (भिडियो सहित)